Warbaahinta Caalamka Oo Qaadacday Ka Qeybgalka Shir Ka Dhacay Dalka Sucuudiga Oo Maalgashiga Lagaga Hadlaayo Iyo Sababta Oo La Xidhiidha Dilka Wariyihii Jamal Khashogi | Berberatoday.com
Warbaahinta Caalamka Oo Qaadacday Ka Qeybgalka Shir Ka Dhacay Dalka Sucuudiga Oo Maalgashiga Lagaga Hadlaayo Iyo Sababta Oo La Xidhiidha Dilka Wariyihii Jamal Khashogi
Hargeysa(Berberatoday.com)-Shrikadaha warbaahinta ayaa isaga baxaya ka qeybgalka shir ku saabsan maalgashiga oo lagu waday in uu ka dhaco magaalada Riyaadh ee dalka Sucuudiga sababo la xidhiidha walaac ay shirkadahaasi ka muujiyeen weriye u dhashay Sucuudiga oo la la’yahay.
Jamal Khashoggi ayaa la waayay meel uu jaan iyo cidhib dhigay muddo haatan laga joogo toban maalmood kaddib markii uu booqday qunsuliyadda Sucuudigu ku leeyahay gudaha magaalada Istaanbuul ee dalka Turkiga.
Tan iyo markii la wayaay meel uu jaan iyo cidhib dhigay Jamaal Khashoggi, saraakiisha sar-sare ee Sucuudigu waxa ay go’aansadeen in aysan ka hadlin arrinta weriyahan, waxaase dhammaantood ay beeninayeen suurtagalnimada in la qafaashay kaddibna la dilay.
Balse safiirka Sucuudiga u fadhiya London Maxamed Bin Nawaf Al-Sacuud ayaa BBC-da u sheegay in uu jeclaan lahaa in uu ogaado xaaladda dhabta ah ee weriyahaasi balse ay tahay in uu ka war sugo natiijada baadhitaan wada jir ay u sameynayaan waddamada Sucuudiga iyo Turkiga.
Balse mar sii horreysay ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in arrinta weriyaha awgeed uuna diyaar u ahayn in uu hakiyo heshiis Mareykanka uu hub uga iibinayay Sucuudiga, kaa oo uu ku baxayo in kabadan boqol bilyan oo dollar.
Jamaal Khashoggi ayaa qoraalladiisa iyo wareysiyada uu siiyo warbaahinta aad ugu dhaliili jiray dowladda Sucuudiga waxa uuna muddo ahaa nin aad ugu dhow boqortooyada ka hor inta uusan iskiis mustaafuris u tagin dalka Mareykanka.